मंगल ग्रह आज ठूलो र चम्किलो देखिँदै, कति बेला हेर्ने? - बडिमालिका खबर
मंगल ग्रह आज ठूलो र चम्किलो देखिँदै, कति बेला हेर्ने?
एजेन्सी। आज मंगल ग्रह र पृथ्वी आमने सामने हुँदैछन्। त्यसैले मंगल ग्रह आज सबैभन्दा चम्किलो र ठूलो देखिने खगोलशास्त्रीहरुले बताएका छन्। आज जीएमटी २३ः२० मा मंगल, पृथ्वी र सूर्य तीनवटै ग्रह १८० डिग्रीको कोण अर्थात् सीधा लाइनमा हुने अमेरिकी अन्तरीक्ष निकाय नासाले जनाएको छ।
यस घटनालाई खगोलशास्त्रको भाषामा मंगल ग्रहको ‘अपोजिसन’ अर्थात् आमने सामने भनिन्छ। अपोजिसनको यो घटना हरेक २६ महिनामा एक पटक हुने खगोलशास्त्रीहरु बताउँछन्। यसको मतलब अब मंगल ग्रहको अपोजिसन डिसेम्बर २०२२ भन्दा अगाडि हुने छैन।
हामीले देख्न सक्छौं?
पृथ्वी र मंगल ग्रह नजिक हुँदा जहिले पनि एउटा अफवाह फैलिन्छ। मानिसहरु मंगल ग्रह मध्यराति चन्द्रमा जस्तै ठूलो देखिन्छ भन्ने हल्ला फैलाउँछन्। तर यो सत्य होइन। तर सत्य के हो भने राति घर बाहिर निस्किएर आकासमा हेरेमा अलि ठूलो ताराजस्तो चम्किलो वस्तु अवश्य देखिन्छ।
खगोल फोटोग्राफर ड्यामियन पिचले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘यसलाई हेर्न मध्यरात कुर्नु पर्दैन। रात पर्नासाथ अति चम्किलो तारा जस्तो वस्तु आकाशमा सजिलै देखिन्छ। तपाईं झुक्किनु हुने छैन।’
यदि मंगल ग्रहलाई अझ राम्रोसँग हेर्न चाहेमा आफ्नो घर नजिकको एस्ट्रोनोमी सेन्टरमा गएर टेलिस्कोपबाट हेर्न सकिने खगोलशास्त्रीहरु बताउँछन्। मंगलबारको मंगल ग्रहको दृष्य खास मानिएको छ। किनभने यसको अवस्थितिको उचाइ फोटो खिच्नका लागि उपयुक्त हुने खगोल फोटोग्राफर डियामियन बताउँछन्।
मंगल मिसन सक्रिय
ग्रहहरु आ–आफ्नो कक्षमा परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन्। यो कक्ष अन्डाकार हुने भएकाले एक विन्दुमा मंगल ग्रह र पृथ्वी नजिक आउँछन्। र फेरि घुम्दै एकअर्काबाट टाढा पुग्छन्। हरेक दुई वर्षमा मंगल ग्रह र पृथ्वी नजिक हुने हुँदा मंगल ग्रहमा जाने मिसन यही मौका पारेर पठाइन्छ। किनभने अन्तरीक्ष यात्राको दुरी कम हुन्छ, थोरै इन्धन र थोरै समयमै मंगल ग्रहमा पुग्न सकिन्छ।
अहिले मंगल ग्रहका तीन वटा मिसन सक्रिय छन्– युएईको होप ओर्बाइटर, चीनको तियानमेन अर्बाइटर एण्ड रोबर र अमेरिकाको पर्सिवियरेन्स रोबर। यी तीनवटै मिसन गत जुलाई महिनामा मंगल ग्रहमा पठाइएको थियो। युएई, चीन र अमेरिकाको यो मिसन सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा मंगल ग्रहमा पुग्ने छ।
यसअघि गत सन् २०१८ को जुलाई ३१ मा मंगल ग्रह र पृथ्वी नजिक आएका थिए। त्यसको दुई महिना अघि नासाले मंगल ग्रहको मिसन लन्च गरेको थियो। सन् २००३ मा मंगल ग्रह र पृथ्वीबिचको दुरी ३४।८ माइल थियो। अब सन् २०३५ सम्म पृथ्वी र मंगल ग्रह यति नजिक हुने छैनन्।
मंगल ग्रहलाई ‘रातो ग्रह’ पनि भनिन्छ। यसको सतहमा आइरन अक्साइडको मात्रा अत्यधिक रहेकाले यो रातो देखिन्छ। पृथ्वीको जस्तै मंगल ग्रहमा उत्तर र दक्षिणी ध्रुव छ, जुन बरफले ढाकिएको छ। यहाँको न्यूनतम तापक्रम माइनस १४० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने वैज्ञानिकहरु बताउँछन्।
मंगल ग्रहको अधिकतम तापक्रम २० डिग्री सेल्सियस हुन्छ। मंगल ग्रहमा २५ घण्टाको एक दिन हुन्छ। तर त्यहाँ वर्ष भने पृथ्वीको भन्दा करिब दुई गुणा लामो हुन्छ। किनभने सूर्यको परिक्रमा गर्न मंगल ग्रहलाई ६८७ दिन लाग्छ।
कँडेलले मुख्यमन्त्री ताक्दा शाहको मुख्य सचेतक पद चट्
“परतन्त्र” मुक्तक संग्रह एक परिचय